Liraglutide: ezigbo ọgwụ maka ịgwọ ọrịa shuga Mellitus Typedị 2 na oke ibu
2. Ọdịdị Liraglutide
3. Ihe ngosi Liraglutide
4. Usoro Liraglutide
5. Ntuziaka na Usoro Nchịkwa nke Liraglutide
6. Kedu ihe bụ uru Liraglutide?
7. Should kwesịrị ịkpachara anya maka nsonaazụ / ịdọ aka na ntị ndị a mgbe ị na-eji Liraglutide
8. Mmekorita nke Liraglutide
9. Ahụmahụ Ọgwụ
Liraglutide (204656-20-2) bụ ọgwụ a na-ere n'okpuru aha ika dị iche iche na mpaghara dị iche iche nke ụwa, nke a na-eji maka ebumnuche ọgwụgwọ dị iche iche. Aha njirimara ndị kachasị ewu ewu Liraglutide na ahịa taa bụ Victoza na Saxenda. Ihe Liraglutide na-adabere na ụdị ịzụtara gị, dịka ọmụmaatụ, Victoza na-ejikarị mmega ahụ kwesịrị ekwesị na nri iji kwalite nchịkwa shuga ọbara na ndị okenye ma pịnye ọrịa shuga 2 nke ụmụaka dịkarịa ala afọ iri. Na mgbakwunye, Victoza gosikwara na ọ dị oke mkpa iji belata ihe ize ndụ nke nsogbu obi dịka ọrịa strok ma ọ bụ nkụchi obi na ndị okenye nwere ọrịa obi na ụdị ọrịa shuga 2.
N'akụkụ aka nke ọzọ, Saxenda, nke bụkwa aha ọzọ Liraglutide, ka eji nri kwesịrị ekwesị na mmega ahụ nyere ndị ọrụ aka ifelata mgbe ha na-ata ahụhụ n'ọnọdụ ọnọdụ ahụike dị iche iche. N'agbanyeghị aha Liraglutide aha, Saxenda ejighị ya maka ọgwụgwọ nke ụdị 1 ma ọ bụ ụdị ọrịa shuga abụọ, ọ bụghịkwa ihe mgbakwunye agụụ ma ọ bụ mgbakwunye-ibu. Dọkịta gị nwekwara ike ịkwado Liraglutide na-eji maka ebumnuche ndị ọzọ etinyeghị na ntuziaka a. Agbanyeghị, ọ bụ ihe amamihe dị na ị nweta dọkịta Liraglutide kwesịrị ekwesị mgbe niile maka nsonaazụ ka mma.
Liraglutide maka ire ere dị na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche na ụlọ ahịa anụ ahụ, mana ị ga-akpachara anya mgbe niile maka isi mmalite gị. Mee nyocha ọ bụla iji hụ na ị nweta ọgwụ gị n'aka onye na-ere ahịa a pụrụ ịtụkwasị obi na nke nwere ahụmahụ. Ogo ọgwụ ị takeụrụ nwere mmetụta na nsonaazụ ị ga-enweta na njedebe usoro usoro ọgwụgwọ. Ọnụ ahịa Liraglutide nwere ike ịdị iche site n'otu isi gaa na nke ọzọ mana gbaa mbọ hụ na inweta ezigbo kacha mma. Ọ bụrụ n ’ejighi n’aka maka isi mmalite ya, kpọtụrụ ọgwụ gị.
Chemically, Ọdịdị Liraglutide mejupụtara glucagon-glu fatycycy dị ka akwa nke na-arụ ọrụ ogologo oge yana ọrụ antihyperglycemic. Ogologo oge nke ọgwụ ahụ bụ nsonaazụ nke abụba abụba, na ntinye palmitic acid na GLP-1, nke na-ejikọ ya na albumin n'ụzọ dị mfe. Ijikọ albumin na-arụ ọrụ dị mkpa na ichedo Liraglutide site na mmebi ngwa ngwa ozugbo ị yourụrụ ọgwụ gị, na nsonaazụ, ọ na-eduga n'ịhapụ ndọtị na GLP-1. Nke a na - enyere gị aka inweta nsonaazụ ịchọrọ n'ime obere obere oge enwere ike.
FDA kwadoro ma Victoza na Saxenda maka ọgwụgwọ nke ọnọdụ ahụike dị iche iche na United States of America. Dịka e kwuru na mbụ, a kwadoro Victoza maka ọgwụgwọ nke nsogbu obi yana ụdị ọrịa shuga 2. A makwaara ya maka mbelata mgbaàmà eriri afọ dịka ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, na afọ ọsịsa. Ndị FDA nakweere Saxenda ahụ ka ọ nye aka na ọgwụgwọ nke oke ibu na njikwa oke ahụ. Ekwesịrị ị Liụ Liraglutide mgbe ịchọrọ iwelata nsogbu ọrịa obi nke na-esite na ọrịa obi ma ọ bụ pịnye ọrịa shuga 2. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchịkwa oke ahụ gị nke sitere na ụdị ọrịa mellitus 2 nke ọrịa shuga, oke ibu Liraglutide ga-abụ ọgwụ kachasị mma maka gị. Ibu ibu nke Liraglutide enyerela ọtụtụ ndị ọrụ aka ịhazi ibu ha. Ọ bụrụgodị na ị na-ahụ ihe mgbaàmà nke enwere ike ịgwọ Liraglutide ntụ ntụ, a don'tụ ọgwụ ahụ na-esoghị ọkachamara na ahụike. Agbanyeghị, cheta na dọkịta gị nwekwara ike ịkọ ọgwụ maka gị ka ị nyere aka n'ịgwọ ọnọdụ ahụike ọzọ ọ bụla edeghị na edemede a.
N'ọtụtụ oge, Liraglutide na-arụ ọrụ dabere na ihe ịchọrọ imezu site na njedebe usoro usoro onunu ogwu. Dịka ọmụmaatụ, usoro Liraglutide maka ndị na-a doseụ ọgwụ Liraglutide maka ịbelata oke dị iche na ndị ọrụ na-ewere ya maka ọgwụgwọ nke ụdị ọrịa shuga 2 mellitus. Aha ahia Liraglutide abuo ahu Victoza na Saxenda rụọ ọrụ dị iche iche ozugbo ha batara n’arụ gị.
Dịka ọmụmaatụ, oke ibu Liraglutide (Saxenda) na-arụ ọrụ site na-egbochi mmepụta homonụ agụụ (glucagon-like-peptide ma ọ bụ GLP-1) na ahụ gị, nke na-achịkwa agụụ gị. Ozugbo oge mmepụta GLP-1 na-agbadata, agụụ gị ga-agbadata wee kwụsị iri calorie, ma n'ikpeazụ, ahụ ga-efunahụ gị. Kalorie na-ahụ maka ịba ụba nke ahụ gị, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ijikwa ha, mgbe ahụ ọ ga-adịrị gị mfe ịme ụfọdụ pound.
N’aka nke ọzọ, Victoza na-arụ ọrụ ụzọ atọ dị iche iche iji wepụta nsonaazụ nke ndị na-emepụta ọgwụ ahụ kwere nkwa. Nke mbụ, Victoza na-arụ ọrụ site n'ibelata nri na-ahapụ afọ gị, nke na-edozi ọkwa shuga dị n'ahụ gị. N'agbanyeghị otu usoro ahụ, ọgwụ ahụ na-egbochikwa imeju gị imepụta shuga dị ukwuu. N'ikpeazụ, Liraglutide, nke bụ isi ihe na Victoza, na-akpalikwa pancreas gị imepụta insulin karịa mgbe ọkwa shuga dị n'ọbara. Ọgwụ na-eme ka ọrụ ndị a dị elu site na ịkwalite arụmọrụ mkpụrụ ndụ beta. Mkpụrụ ndụ na - enyere aka ịchịkwa shuga ọbara site na ịhapụ insulin, nke na - egbochi ogo shuga dị n'ahụ gị. Nkpali nke imeputa insulin n’ime aru gi bu isi ihe kpatara eji eji Victoza eme ihe n’ememe aru pịnye 2-arịa ọrịa shuga mellitus.
Liraglutide na-eji ịdị iche n’otu onye ọrụ na onye ọzọ dabere na ọnọdụ ahụike na-agwọ ọrịa Ọgwụ ọkachamara kwesịrị ị'sụ ọgwụ ị drugụ ọgwụ ahụ dabere n'ọnọdụ a na-emeso ya. A daghị ụmụaka na-erubeghị afọ iri ume ị thisụ ọgwụ a, ebe ọ nwere ike kpughere ha oke mmetụta ọjọọ. Ahụ mmadụ dịkwa iche, ọ bụ ya mere na ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịga maka nyocha ahụike tupu ịmalite ị .ụ ọgwụ ọ bụla. Agbanyeghị na Liraglutide na-abịa na usoro usoro onodu ogwu nke onye nrụpụta tụrụ aro ya si arụ ọrụ, oge ụfọdụ ọ gaghị arụ ọrụ maka gị. Dọkịta bụ naanị ezigbo mmadụ kwesịrị ịtọ gị ọgwụ Liraglutide kwesịrị ekwesị mgbe ị nyochachara ahụike gị.
Liraglutide bụ ọgwụ na-agbagharị agbatị nke a ga-eme na ogwe aka gị dị elu, afọ ma ọ bụ n'apata ụkwụ. Enweghị oge a kapịrị ọnụ ị ga-eji were Liraglutide, ma ị nwere ike were ya ma ọ bụ na-enweghị nri. Nwere ike ịgbagharị saịtị inraglutide mgbe niile iji belata nsonaazụ ma ọ bụ ihe mgbu ị nwere ike ịnọ na mpaghara. Enwere ike ịgbanwe oge nchịkwa nke usoro ahụ n'ụzọ na-enweghị ntụsara ahụ na-enweghị idozi usoro ịtọ. Ọ dị mma ịchọrọ ilele ihe niile Liraglutide mudi anya; should kwesịrị ị were naanị ntụtụ gị mgbe ihe ngwọta enweghị agba, doo anya, enweghị ụrọ ọ bụla. Ọ bụrụ na osooso gị nwee agba ọ bụla pụrụ iche, ewepụkwala ya na ịkpọtụrụ dọkịta gị.
Usoro ọgwụgwọ Liraglutide ntụ ntụ ga-adabere na ntinye ahụ gị, afọ yana ọnọdụ ahụike ị na-agwọ.
Ọrịa mamịrị 2
The mbụ Liraglutide ntụ ntụ (204656-20-2) maka ndị okenye bụ 0.6mg, nke a ga-ewere ya otu ugboro kwa ụbọchị maka otu izu. Mgbe otu izu gachara, enwere ike idozi usoro onunu ogwu ya na 1.2mg otu ugboro kwa ubochi, oburu na inwetaghi ikike oria, dokita gi nwere ike bulite usoro ogwu gi karie ka 1.8mg kwa ubochi. Usoro mmezi Liraglutide kwesịrị ịdị n'etiti 1.2 na 1.8 mg kwa ụbọchị. Agbanyeghị, oke kachasị bụ 1.8mg kwa ụbọchị.
Izu mbu nke 0.6mg kwa ụbọchị iji belata mgbaàmà eriri afọ na-esite na mbido usoro ọgwụgwọ na enweghị ike zuru ezu maka njikwa glycemic. Agbanyeghị, Liraglutide abụghị onye nọchiri anya insulin na ndị ọrịa nwere ụdị ọrịa shuga mellitus 1 ma ọ bụ ketoacidosis na-arịa ọrịa shuga ekwesịghị iwere ya. Mgbe ịmalite usoro ọgwụgwọ a, tụlee iwelata ụlọ ọrụ insulin iji belata ihe ize ndụ hypoglycemia.
Mbelata ihe egwu
Usoro ọgwụgwọ Liraglutide mbụ maka ndị okenye nwere nsogbu obi bụ 0.6mg kwa ụbọchị, ekwesịrị ị were ya n'izu mbụ. Ekwesịrị ịbawanye usoro a ga-agbatị ruo 1.2mg kwa ụbọchị n'izu na-esochi, ọ bụrụ na ị nwetaghị njikwa glycemic, dọkịta gị kwesịrị ịbawanye usoro ọgwụgwọ ahụ ruo 1.8mg kwa ụbọchị. Ma, tupu oge ahụ Liraglutide ntụ ntụ a na -ekwukarị ọgwụ ruo n'ókè kachasị, ị ga-enweta nsonaazụ achọrọ. Usoro ọgwụgwọ mmezi kwesịrị ịdị n'etiti 1.2mg na 1.8mg kwa ụbọchị, ebe ogo okenye kachasị bụ 1.8mg kwa ụbọchị.
Liraglutide okenye maka oke ibu ma ọ bụ oke ibu
The ihe eji eme ka aru ghara ibu ibu ekwesịrị ịbawanye usoro a ga-agbaso, iji belata ohere ị ga-enwe na mgbaàmà eriri afọ. Adjustmezi usoro usoro onunu ogwu nwere ike gbue oge maka izu ọzọ maka nsonaazụ kachasị mma. Agbanyeghị, dọkịta gị kwesịrị iduzi gị na usoro a. Usoro ọgwụgwọ ebidore ebe a bụ 0.6, nke ekwesịrị ịkpụgharị ụzọ ọzọ otu ugboro kwa ụbọchị. N'ime izu nke abụọ, enwere ike ịbawanye dose ahụ ruo 1.2mg kwa ụbọchị; n'izu nke atọ, enwere ike ibulite usoro ọgwụgwọ ahụ gaa na 1.8 kwa ụbọchị. N’izu nke anọ, ekwesịrị ịba ụba usoro ọgwụgwọ ahụ ruo 2.4mg na izu nke ise ka ọ bụrụ 3mg otu ugboro kwa ụbọchị. Agbanyeghị, dọkịta gị ga-eduzi gị oge na otu ị ga - esi melite usoro ị .ụ ọgwụ.
Uzo eji edozi ya ebe a bu 3mg otu ugbo kwa ubochi, mana oburu na ahu gi anaghi anabata ya, dibia nwere ike nye gi ndumodu ikwusi. Njikwa ọgwụ na-egbu oke oge iji ọgwụ a ka enwere ọgwụ were were naanị. Na oke ibu, Saxenda Liraglutide akara egosiwo na ọ dị mkpa na njikwa ibu, a dịghịkwa eji ọgwụ ahụ eme ihe maka ọgwụgwọ nke ụdị ọrịa mellitus 2 nke ọrịa shuga. Agbanyeghị, a maara Victoza maka ịgwọ ụdị ọrịa mamellitus 2 nke ọrịa shuga na nsogbu obi.
Usoro Ọgwụ ụmụaka
Ngwunye ọgwụ Liraglutide kwesịrị naanị nke ụmụ dị afọ iri gbagoro ga-ewere. Nwa ọ bụla dị obere karịa nke ahụ ekwesighi ịnye ọgwụ a ọbụlagodi na ha gosipụtara ihe mgbaàmà nke enwere ike ịgwọ ya na peptide a. Sgwọ ọgwụ pediatric liraglutide dabere na ọnọdụ ahụike na-agwọ. Usoro ndị a tụrụ aro maka dos dị ka ndị a;
Usoro onunu ogwu maka oria oria Dika 2
Usoro ọgwụgwọ Liraglutide nke a tụrụ aro ka ọ bụrụ 0.6mg, nke a ga-ewere ya otu ugboro kwa ụbọchị maka opekata mpe otu izu. Mgbe nke ahụ gasịrị, enwere ike ịbawanye dose ahụ gaa na 1.2mg kwa ụbọchị, ọ bụrụ na enwetaghị nchịkwa glycemic, ọgwụ ahụ nwere ike ịbawanye ọgwụ ahụ gaa na 1.8 gm n'izu na-esote. Usoro kachasị maka pediatric maka ụdị shuga abụọ bụ 1.8mg kwa ụbọchị, ebe usoro nlekọta ahụ na-esite na 0.6mg ruo 1.8mg kwa ụbọchị.
A na-enyekwa ụmụ irighiri ahịhịa ahụ ka enyere aka na ọgwụgwọ nke ọnọdụ dị iche iche dịka nsogbu akụrụ na imeju. Agbanyeghị, mgbe ị na - edozi ọnọdụ abụọ a, ị ga - ewere Liglutide nke ọma ebe ọ nwere ike ibute nsonaazụ dị oke njọ mgbe ị overụbiga ókè. Enweghị mmezi dose ka akwadoro mgbe ị na-ewere peraide liraglutide maka okwu umeji ma ọ bụ gbasara akụrụ. Mgbe ị na-a liụ ọgwụ liraglutide, belata oriri insulin ọ bụla iji belata ihe ize ndụ nke hypoglycemia.
Kedu ihe ga-eme ma ọ bụrụ na m gafere?
Doụ ọgwụ ọ bụla abụghị ezigbo echiche ma ekwesighi ịgba gị ume ọbụna mgbe ị na-a Liraglutide dose maka felata ma ọ bụ ọgwụgwọ nke ahụike ọ bụla ọzọ. A na-adụ gị ọdụ ka ịrapagidesie ike na ntuziaka usoro ọgwụ dọkịta gị nyere gị. Singụbiga mmanya ókè ga-eduga gị nnukwu nsonaazụ, nke nwere ike njọ ọnọdụ ahụike gị ma ọ bụdị bute nsogbu ahụike ndị ọzọ. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ, ịdoụbiga mmanya ókè nwere ike ibute ihe ọghọm ma ọ bụ mmeghachi ahụ gị na ọgwụ. Nsonaazụ ndị ị overụbiga ọ overụ na-emetụtakarị ọgbụgbọ na ọgbụgbọ. Mgbe ị chọpụtara na ị moreụrụla ọgwụ ole a tụrụ aro karịa ka ị tụrụ aro, chọọ nlekọta ahụike ozugbo ị nwere ike. I nwekwara ike gakwuru dọkịta gị maka enyemaka.
Kemgbe ọtụtụ afọ, Liraglutide egosiputawo abamuru dị iche iche, ọkachasị na ụwa ahụike. Agbanyeghị, ịnwere ike ịnwe naanị kacha uru liraglutide, ma ọ bụrụ na ị rapara na ntuziaka ịsụ ọgwụ na nri kwesịrị ekwesị ma ọ bụ mmega ahụ dịka dọkịta gị gwara gị. Nke a bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị mara Liraglutide.
Na-eme ka ọrịa oria 2 dị elu
Liraglutide akara aha Victoza ka FDA ejiri wee kwado ya maka ọgwụgwọ nke ụdị ọrịa shuga 2. Ọgwụ na-enyere aka ịchịkwa shuga ọbara n’ahụ gị. Mgbe ogo shuga dị n’ahụ gị, liraglutide na-akpali umeji gị imepụta enzyme insulin nke na-enyere aka wepu glucose ọbara.
Nyere aka na ịlụso oke na ibu ọgụ
Na United States of America, FDA kwadoro Liraglutide maka ọgwụgwọ nke oke oke mgbe ọ nwesịrị ọfụma n'ibelata agụụ na ị ofụ calorie nke nyere aka n'ịchịkwa ahụ. Na nkezi, ụmụ nwanyị ahụtala oke belatara nke ukwuu mgbe ha na --ebu oke Liraglutide karịa ụmụ nwoke. Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na ụmụ nwoke agaghị erite uru na ọgwụ a. Maka ahụmịhe ịba uru dị mma na ọgwụ a, nri kwesịrị ekwesị na mmega ahụ kwesịrị ịnwekwa usoro ị .ụ ya.
Na-echebe usoro anụ ahụ
Liraglutide abụwo ihe dị mkpa iji chebe akwara obi gị ma belata ihe ize ndụ nke ọrịa obi. Ọmụmụ ahụike gosipụtara na ị liụ liraglutide, ọrịa obi ọfụma na-esite na ụdị ọrịa shuga 2 nke ọrịa mellitus na oke ibu. Ọgwụ ahụ na-enyekwa aka n’ichezi ọbara ọbara gị, nke na-enyere gị aka ime ka ahụ ike gị ike.
Ekwuru na ọgwụ a nwere mmetụta dị mma n'ịmezi ahụike ụbụrụ gị, enyemaka n'ịchịkwa nchekasị, ọ nwere ike ịbụ ihe mgbakwunye mgbochi na mgbochi. N'ime ọmụmụ ọgwụ gbasara ọgwụ, liraglutide gosipụtara na ọ nwere ike inyere ndị mmanya riri ahụ aka. Agbanyeghị ịraụbiga mmanya ókè nwere ike itinye gị ọrịa ma mebie uru niile ị tụrụ anya ya.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọgwụ ọ bụla, mgbe ejiri ya mee ihe ma ọ bụ juputa ya ókè nwere ike ikpughere gị nsonaazụ dị oke egwu, na liraglutide abụghị ahụkebe. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ nsonaazụ ndị ọzọ nwere ike ịbụ nsonaazụ nke otu ahụ gị si emeghachi omume na ịkpa oke Liraglutide. .Fọdụ ịdọ aka ná ntị ụgha bụ ihe ị na - eme na - apụ n'anya na oge, mana ọ bụrụ na mmetụta ndị na - esote anaghị akwụsị na oge ma ọ bụ na ọ daa oke, chọọ nlekọta ahụike;
Imi na-a Runụ ọsọ, ụkwara ma ọ bụ mgbe ọsụsọ
Ogbu isi siri ike
Inggba ọkụ ma ọ bụ nfe urin
Liraglutide Injection saịtị rednessor rashes
Nkpachi afọ na obi mgbawa
Enwere ịdọ aka ná ntị dị oke njọ nke na-achọ nlekọta ahụike ozugbo ị malitere ịhụ ha, ha gụnyere;
Ngwongwo na-acha uhie uhie
Anwụ na-acha odo odo ma ọ bụ anya
Ọ bụrụ na ịmalite iche gbasara igbu mmadụ, imerụ onwe gị na ndị ọzọ ahụ
Ọgbụgbọ, akpịrị ọnụ, ire, ihu, anya ma ọ bụ ọnụ.
Siri ike na ilo mmiri ma ọ bụ iku ume.
Maka ndị a siri ike Liraglutide mmetụta, a dụrụ gị ọdụ ka ị kwụsị ị doụ ọgwụ ahụ ozugbo ịchọrọ enyemaka ahụike.
Mkparịta ụka ọgwụ nwere ike ịmetụta otu ọgwụ gị ga-esi rụọ ọrụ ma ọ bụ tinye gị n'ihe egwu nke ịnwe oke mmetụta. Ya mere, tupu ịmalite ị Liụ ọgwụ Liraglutide, ọ dị mkpa ịgwa dọkịta gị gbasara ọnọdụ ahụike ọ bụla ọzọ ị na-a areụ ọgwụ. Drugsfọdụ ọgwụ agaghị arụ ọrụ ọnụ, ọ dịkwa mma ka dọkịta gị mara maka ọgwụ ọ bụla ọzọ ị nwere ike ị na-a .ụ. Iji nọrọ n'akụkụ nchebe, amalitela, gbanwee usoro ị changeụ ọgwụ ma ọ bụ kwụsị ị anyụ ọgwụ ọ bụla na-esoghị ndị ọkachamara na-ahụ maka ahụike.
A dụrụ gị ọdụ ka ị ghara ị anyụ ọgwụ a ọ bụla na ọgwụ ọ bụla nwere Liraglutide n'ihi na ọ nwere ike ibute ịdoụbiga mmanya ókè wee kpughee gị mmetụta ọjọọ. Dabere na ahụike gị, dọkịta gị ga-enye gị ikike Mmekorita nke Liraglutide iji rụpụta nsonaazụ ya. Enwere ọtụtụ ọgwụ ị nwere ike ibikọ ọnụ na Liraglutide dịka acetohexamide, albuterol, cinoxacin na danazol, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Dabere na nyocha nke liraglutide na nyiwe dị iche iche dị n'ịntanetị, ọtụtụ ndị ọrụ nwere afọ ojuju maka nsonaazụ na uru ha riterela ma ọ bụ mgbe ha takingụsịrị ọgwụ. Ọmụmụ ọgwụ gosipụtakwara etu ọgwụ siri baa uru n’ịgwọ ọnọdụ ọnọdụ ahụike dị iche iche dịka oke ibu, ụdị ọrịa mamellitus 2, nsogbu gbasara akụrụ na igbochi ọrịa obi na esite na ọnọdụ ahụike dị iche iche. Mmekọrịta mmekọrịta nke liraglutide egosikwala na enwere ike n'ịgwọ ụdị ọrịa shuga 2 n'ime ụmụaka ruru afọ iri.
Agbanyeghị, ụfọdụ ndị ọrụ enwebeghị ahụmịhe banyere ọgwụ a, mana enwere ike ịpụta na Liraglutide overdose ma ọ bụ nnabata ahụ. Ozi ọma ahụ bụ na enwere ike ịgbanwere nsị nke Liraglutide ma ọ bụrụ na ịkpọtụrụ dọkịta gị n'oge dị mma. Bestzọ kachasị mma iji zere inwe mmetụta dị oke njọ mgbe ị na-a thisụ ọgwụ a na-aga nyocha ahụike tupu ịmalite usoro ịsụ ọgwụ gị na ikwe ka ndị na-atụgharị uche ka ịtọ gị usoro ịchọrọ. Ọ dịkwa mma ịgbaso ntuziaka ịsụ ọgwụ wee gwa dọkịta gị banyere ọgwụ ọ bụla ọzọ ị na-a takingụ.
Ọgwụ a egosila na ọ dị mkpa na ahụike ahụ ike karịa n'ịgwọ oke ibu, ụdị ọrịa shuga 2 na nsogbu obi, n'etiti ndị ọzọ. Liraglutide ntụ ntụ (204656-20-2) maka ire ere dị na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche, mana ị ga-ahụ ya na aha akara dị iche iche dịka Saxenda na Victoza. Agbanyeghị, jide n'aka na ị ghọtara ihe ejiri aha ọ bụla. Dịka e kwuru n’elu, a na-eji aha njiri mara Liraglutide aha maka otu nzube. A kwadoro Saxenda maka oke ibu na ọgwụgwọ oke ibu ebe a na-eji Victoza eme ihe n'ụdị ọgwụgwọ ọrịa shuga 2 yana ọrịa obi na-esite n'ọbara shuga dị elu. Agbanyeghị, soro ntuziaka ịsụ ọgwụ iji zere inwe mmetụta Liraglutide.
Ọ dị mma ime nyocha ziri ezi gbasara gị liraglutide ịzụta Isi mmalite tupu ịzụrụ ihe. Taa enwere ọtụtụ ndị na-ere peptide n'ahịa ahụ, na-eme ka o siere gị ike ịmara ebe ị ga-enweta ọgwụ dị mma ga-ekwe gị nkwa nsonaazụ. Lee nyocha nke liraglutide na webụsaịtị onye na-ere ya ka ị nweta nkọwa dị na ngwaahịa na otu onye na-ere ahia si arụ ọrụ. Chohọrọ onye kachasị nwee nghọta ma mara amara nwere ike ịzụta ngwaahịa ga-eme ka obi sie gị ike na ọrụ dị mma yana ngwaahịa ọgwụ ọfụma. Liraglutide dị iche n’otu onye na-ere ya na onye ọzọ.
Ikwesighi ichegbu onwe gi banyere ihe obula mgbe ị na-ewere Liraglutide ebe ọ bụ ọgwụ iwu kwadoro yana nsonaazụ ka mma, na-etinye ọgwụ gị na usoro usoro onunu ogwu niile.
Kaakeh, Y., Kanjee, S., Boone, K., & Sutton, J. (2012). Liraglutide ‐ merụrụ nnukwu akụrụ mmerụ ahụ. Ọgwụ ọgwụ: Journal of Human Pharmacology na Ọgwụ Ọgwụ, 32(1), e7-e11.
Marso, SP, Daniels, GH, Brown-Frandsen, K., Kristensen, P., Mann, JF, Nauck, MA,… & Steinberg, WM (2016). Nsonaazụ Liraglutide na akwara dị n'ụdị shuga 2. New England Journal of Medicine, 375(4), 311-322.
Lind, M., Hirsch, IB, Tuomilehto, J., Dahlqvist, S., Ahrén, B., Torffvit, O.,… & Sjöberg, S. (2015). Liraglutide n'ime ndị mmadụ lebara anya maka ụdị ọrịa shuga nke 2 nwere otutu insulin kwa ụbọchị: nnwale na-adakarị ụlọ ọgwụ (MDI Liraglutide ule). Bmj, 351, h5364.
Davies, MJ, Bergenstal, R., Bode, B., Kushner, RF, Lewin, A., Skjøth, TV,… & DeFronzo, RA (2015). Irè nke liraglutide maka mbelata oke n’etiti ndị ọrịa nwere ọrịa shuga 2: nnwale nke ọrịa SCALE enweghị usoro. Jam, 314(7), 687-699.